New Day Jobs | LEARN FROM FAILURE | Career Blogs
Career Advice Personal Upgrade 23 Jan 2020
ကျွန်တော်တို့ လူပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရှုံးကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ကျလေ့ရှိလဲ? ပုံမှန်အားဖြင့်အဖွဲ့အစည်း၊ စာသင်ခန်းတစ်ခန်း၊ လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်၊ဝင်ငွေ၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊အရည်အချင်း၊ စသည့် အရာတွေကိုတန်းစီလိုက်တဲ့ အခါ နောက်ဆုံးမှာ ရောက်နေတဲ့သူတွေကို အရှုံးသမား ဆိုပြီးသတ်မှတ်လေ့၊မှတ်ချက်ချလေ့ရှိကျပါတယ်။ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာရှုံးနှိပ့်ခြင်းကို ခံစားရလဲ?
ဘယ်လို အချိန်တွေမှာအရှုံးသမားလို့ခံစားရလဲဆိုရင် အရိုးရှင်းဆုံးဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဝင်ပြိုင်ပြီး ရှုံးသွားတဲ့အခါ၊ ရမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ကနေအပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ အခါ၊ ကိယ်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခု မဖြစ်မြောက် (သို့) အဆင်မပြေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရှုံးသမားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ရှုံးနှိမ့်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်မလဲ?
အမေရိကန် မှာအကောင်းဆုံး ခေါင်းဆောင်၊အထင်ရှားဆုံး သမ္မတအဖြစ်အများကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Abraham Lincoln( အီဗရာဟန် လင်ကွန်း ) က "ငါအစိုးရိမ်ဆုံးက မင်းဘယ်လောက် ရှုံးနိမ့်မှာကို မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ရှုံးနိမ့်မှုကိုနေသားကျသွားနမှာကို စိုးရိမ် တာ" ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တမ်း တစ်လေ ျှာက်လုံးမှာ ရှုံးနှိမ့်မှုတွေ အများကြီးကြုံတွေ့ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရှုံးနှိမ့်မှုတွေကို နေသားကျပြီး နောက်ထပ်မကြိုးစားတော့တဲ့ အခါ ကျမှုတကယ် ရှုံးနှိမ့်မှု အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ သင့်ဘဝမှာ ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ ရှုံးနိမ့်မှု ပဲကြုံရကြုံရ နောက်ထပ်ကြိုးစားဖို့ ကိုဘယ်တော့မှလက်မလေ ျှာ့လိုက်ပါနဲ့။
၁. ဘယ်နေရာမှာသင်မှား သွားတာလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစားပါ။
စဉ်းစားလို့ရပြီဆိုရင် မှားသွားတဲ့အချက်လေးတွေကို မှတ်သားထားပါ။(စာရွက် သို့ စိတ်နဲ့ မှတ်ပါ)
၂. ပြီးရင် ဘာတွေကြောင့်မှားသွားသလိုဆိုတာပြန်စဉ်စားပါ။ (ကြောက်နေလို့လား၊ ဂရုမစိုက်ခဲ့လို့လား၊စသည်ဖြင့်)
၃. ပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားလူတစ်ယောက်နေရာကနေ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ( အကယ်၍အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေထားတာဆိုရင် အင်တာဗျူးတဲ့ နေရာကနေ သင့်ကိုယ်သင်ပြန်ကြည့်ပါ )
၄. သင့်အမှားတွေကို သင်သေသေချာချာသိပြီဆိုရင် ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာ လေ့လာပါ။(သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေကနေ လေ့လာနိုင်သလို၊အင်တာနက်မှ လဲရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ် )
၅. သင့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို အခြားသူတွေကို ပြောပြပြီး အကြံဉာဏ်တွေတောင်းခံပါ။(အကြံပေးမဲ့ လူကလဲ အကြံအဉာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်)
၆. နောက်ဆုံး အထက်ပါ အဆင့်တွေကနေ သင်ယူခဲ့တဲ့ အရာကို သင့်ရဲ့နောက်ထပ်ကြိုးစားမှုမှာအသုံးချပါ။နောက်ထပ်ကျရှုံးခဲ့ရင်လဲ ဒီနည်းအတိုင်းပဲ ထပ်ခါထပ်ခါအောင်မြင်တဲ့ အထိကြိုးစားပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Thomas Edison တောင်မှ လျှပ်စစ်မီးသီး ကို အကြိမ်ပေါင်းတစ်သောင်း ကျော်လောက် စမ်းသပ်ပြီးမှ အောင်မြင်ခဲ့တာပါနော်။
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေကို New Day Jobs မှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။